Khabiir Kala Duwan: Sida loo Iska Badbado Xayeysiisyada Android Apps, Games iyo Browsers
Xayeysiintu waxay noqdeen sharaf daruuri ah, iyo codsiyo iyo bogagyo kala duwan ayaa bixiya adeegyo bilaash ah, bilaash ah, iyo adeegyo bilaash ah maxaa yeelay xayeysiistayaashu iyaga ayay bixinayaan. Sidaa daraadeed, bixiyeyaasha adeegga waa inay u adeegaan xayeysiis si ay u soo booqdaan oo ay soo saaraan dakhliyada lagu hayo inay ku hayaan adduunka ganacsiga muddo dheer. Waxay sidoo kale u baahan yihiin dakhliyada martigelinta iyo adeegyada domain iyo sidoo kale horumarinta - vision spinner iii battery. Isticmaalayaasha isticmaala faa'idooyinka isticmaalka alaabtooda bilaash ah. Si kastaba ha noqotee, meelaynta xayeysiisku waxay cadeyneysaa inay dhibeyso oo ay gacan ka geysaneyso qaar ka mid ah waayo-aragnimada isticmaalka dadka aan raaxeysaneyn.
Halkan Michael Brown, xirfad sare oo ka socda Semt Digital Services, ayaa kuu sheegi doona habab aad ku xakameyso xayeysiisyada qalabkaaga Android.
Waxaad si fudud uga hortagi kartaa xayeysiisyo badan oo ka muuqda ciyaaraha iyo codsiyadaada, iyo sidoo kale daalacayaashaada. Waxaan rajeyneynaa in hababkaasi ay u shaqeyn doonaan aaladaha aan rukunka ahayn iyo kuwa aasaasiga ah, laakiin ka hor inta aanan bilaabin, waa inaad haysataa Maamulaha File sida Maamulaha Faylka Astro. Qaar ka mid ah maamulayaasha faylasha kale ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa, laakiin waa inaad isku daydid inaad xayeysiiso xayeysiiska khatarahaaga. Mas'uuliyad kama saarno waxyeellooyin kasta ee qalabkaaga Android.
Habka # 1. Adblock Plus (ABP)
Habkan, waxaad isticmaali doontaa ad-blockers (codsiyada) si loo xakameeyo dhammaan xayeysiisyada qalabkaaga Android, sida xayeysiisyada lagu muujiyay cayaaro iyo barnaamijyo kala duwan. Nasiib wanaag, waxaa jira ad-blockers kala duwan ee dadka isticmaala Android iyo horumarinta app..Kuwa ugu fiican, si kastaba ha ahaatee, waa AdAway iyo Adblock Plus (ABP). Waxaad rakibi kartaa mid ka mid ah barnaamijyadan oo ku saleysan baahidaada iyo rajooyinkaaga. Haddii aad rabto inaad xayeysiiso xayeysiiska Adblock Plus, waxaan kuu sheegi karaa in tani ay tahay barnaamijka furan oo furan oo leh ikhtiyaar si loogu oggolaado xayeysiisyada aan ahayn midka aan ahayn. Nidaamkani wuxuu ku habboon yahay qalab aan rujin lahayn iyo kuwa aasaasiga ah. Waxaad si sahlan u rakibi kartaa app ad-blocker on qalabkaaga, laakiin side-loading mar walba looga baahan yahay sida Google dhawaan la saaray dhammaan barnaamijyada ad-block ka soo Google Play Store.
Habka # 2. Ku xayiraan xayeysiisyada 'martigelinta' File
Waxaad si fudud u xayiri kartaa dhammaan xayeysiisyada aan la rabin adoo isticmaalaya feylka martida. Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka hortagto xayeysiisyo badan oo ku saabsan qalabka Android aadna u shaqeyso qalabka xididka oo kaliya. Faylka martida waa fayl cad oo ku jira nidaamka hawlgalka. Markaad rabto in aad bilowdo goobta adeegsanaysa magaca martida, nidaamka hawlgalka ayaa raadin doona feylka martida si loo qiimeeyo cinwaanka IP ee u dhigma. Haddii uu ku guuleysto, cinwaanka IP-ga la isticmaalay ayaa loo isticmaali doonaa. Haddii kale, DNS (Adeegga Domain Name Service) wuxuu helayaa su'aal ku saabsan sida loo helo IP ee magaca martida. Waxaad si sahlan u sameysan kartaa faylka martida. Tani, waa inaad tagtaa MVPs-ka barta shabakadda halkaas oo faylka caadiga ah furan yahay. Ku kaydi kombuyutarkaaga kaddibna koobi feylka martida ah ka soo qaad qalabkaaga Android
Ha ilaawin inaad ogaatid waddada feylka. Qalabka Android, waa inaad furto feylka faylka oo koobi faylka martida loo geeyo goobtaas.
Waa run in xayeeysiinta ay xannibaan iyo dhib ku noqdaan, laakiin waxay yihiin hab wanaagsan oo lagu ogaanayo waxyaabaha ugu dambeeya, adeegyada, bogagga, iyo codsiyada. Waa inaad u ogolaataa xayeysiisyada aan ku-daba-galeynin inay soo bandhigaan fikrad ah waxa dhacaya maalmahaas. Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa barnaamijyada lacag-bixinta ah si aad u joojiso xayeysiisyada kaa xanaajinaya internetka.